I-60 YOYILO LWEENDAWO ZOKUHLAMBELA EZICWANGCISIWEYO KUNYE NEMIBONO YETILE - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela I-60 yoyilo lweeNdawo zokuhlambela eziCwangcisiweyo kunye neMibono yeTile
I-60 yoyilo lweeNdawo zokuhlambela eziCwangcisiweyo kunye neMibono yeTile
Wamkelekile kwigalari yethu yoyilo oluhle lokuhlambela. Eli phepha libonisa uyilo lwangaphakathi kwigumbi lokuhlambela kwiindlela ezahlukeneyo ezinezakhiwo ezinkulu kunye nokugqitywa okuphezulu. Fumana inkuthazo yemibono yethayile yangasese, uyilo lweetayile zeshawari kunye nolwakhiwo lwegumbi lokuhlambela ukusuka kwimifanekiso engezantsi.
Uyilo oluphefumlelweyo lwelizwe lokuhlambela luboniswe ngentla apha lisebenzisa indibaniselwano yee-browns ezifudumeleyo kunye ne-beige, ukuzama ulwakhiwo olukhethekileyo lweethayile ukunika izinto ezahlukeneyo ezibonakalayo. Imigangatho ziithayile zodongwe ezilula zokulinganisa amatye endalo kwi-beige edityaniswe namaqhekeza amancinci eethayile zemibala kwiikona zawo kwaye ibekwe ngendlela eyahlukileyo. Ishawa isebenzisa izinto ezifanayo zomgangatho, kodwa ngobukhulu obahlukileyo kunye nolwakhiwo olwahlukileyo. I-quartz yamatye eSilestone e-brown yaseBrazil yayisetyenziselwa i-countertop, ngelixa ezinye iikhabhinethi kunye neendonga zigcina umthunzi okhanyayo we-beige.
Amagumbi okuhlambela ngokwezifiso
Iimpawu zoYilo lweGumbi lokuhlambela eliqhelekileyo
Ukuhlambela amagumbi okuhlambela
Igumbi lokuhlambela eliCeramic
Igumbi lokuhlambela eliyiThayile
Igumbi lokuhlambela le-Porcelain Tile
Igumbi lokuhlambela le Marble
Amatye okuhlamba iitayile
Isileyiti Igumbi lokuhlambela
Umgangatho Wokuhlambela Wekhonkrithi
Amagumbi okuhlamba amhlophe eTile
Amagumbi okuhlambela esiqhelo anamhlanje makhulu, amanye makhulu njengamagumbi okulala alawulayo. Ngelixa kulula Uyilo lokuhlambela inokuba nendawo yeshawari kuphela, indawo yangasese kunye nesinki, igumbi lokuhlambela elinikezela ngokwesiko abanini balo ngaphezulu kakhulu kunoko. Uninzi lokuhlambela lubandakanya indawo yokuphumla. Igumbi lokuphumla elenzelwe igumbi lokuhlambela libandakanya ukufudumeza ngendawo ebaselwe umlilo, okanye inkqubo yokufudumeza esemgangathweni enezitulo ezimnandi ezimbalwa okanye isofa kunye neerabha zokwenza indawo emnandi yokuphumla kuyo.
Olunye uphawu oludumileyo lokuhlambela kwigumbi lokuhlambela yindawo yokunxiba efanelekileyo apho unokunxiba kwaye uzilungiselele ngaphandle kokuphuma kwigumbi lakho lokuhlambela. Zakhelwe kumagunjana, izinto ezingento ezibanzi kunye nemiphezulu yeetafile, ukukhanya kwendalo okuthambileyo kunye nezibuko ezihonjisiweyo zizinto ezisisiseko sendawo yokuhlambela yokuhlambela. Umgangatho wendawo yokuhlambela yangasese iya kuba yibhafu. Oku kunakho okanye kungabikho ishawa eyakhelweyo- okanye ibe nendawo yeshawari eyahlukileyo- kwaye inokuza ngeendlela ezahlukeneyo kunye nobukhulu.
Yintoni eyenza igumbi lokuhlambela eliqhelekileyo libe zizinto zokwenene. Uyilo lokuhlambela kwigumbi lokuhlambela lubandakanya iemabhile ezininzi, izinto ezintsonkothileyo ngomthi, kunye neethayile zesiko ezindongeni, emgangathweni nakwimpahla yefanitshala. Insimbi engenasici, i-chrome, ubhedu kunye nezinye izinyithi zepremiyamu zisetyenziselwa izixhobo kunye nokuhombisa. Igumbi lokuhlambela elinobunewunewu lihlala linophahla oluphezulu okanye oluphezulu oluxhasa ukukhanya kwezibane ezifana neekhandlela okanye ukukhanya kwezibhakabhaka ukukhanya kwendalo.
Xa ucinga ngephupha lakho lokuhlambela eliqhelekileyo, kubalulekile ukuba unike ingcinga malunga nezinto ezahlukeneyo zoyilo oza kuzibandakanya. Awunakho ukuphosa nje zonke izimvo zakho kunye kwaye unethemba lokugqwesa, kuya kufuneka ucinge ngendlela eziza kusebenza ngayo zonke ezi nkcukacha ukudala indawo etofotofo, ekhululekile kwaye eyakho ngokwenyani.
Khetha ibhafu efanelekileyo
Ibhafu yindawo ekugxilwe kuyo kwindawo yakho yangasese. Ibhafu yindawo ekuza kuchitha ixesha lakho kuyo, uthambisa amaxhala kunye nexhala.
• Ukuba uncike kwisitayile sokuhlambela sendabuko okanye seediliya, indawo yokuma yasimahla, ibhafu yeenyawo, inika umbono ofanelekileyo wobuhle obudala.
• Ukuba ungathanda uyilo lwangoku lokuhlambela olwanamhla, isitya esitshisiweyo yindawo efanelekileyo yokuphumla.
Faka ishawa enkulu
Ngamanye amaxesha, endaweni yokufunxa ixesha elide, into oyifunayo okanye oyifunayo kukuhlamba okukhawulezayo kodwa okuhlaziyayo. Kodwa, ngenxa yokuba ishawa iyakhawuleza, oko akuthethi ukuba ayinakuba bubunewunewu.
• Indawo evaliweyo, eneglasi yonke ebiyelweyo sisongezo esihle kuyo nayiphi na indlu yangasese. Ikwenza indawo yokuhlambela kunye nendawo yonke yangasese ibonakale inkulu.
• Isitulo esakhelwe ngaphakathi siphumle ngakumbi, sikunika indawo yokulala phantsi kwesitshizi.
• Intloko yeshawari yemvula ijika ishawa eqhelekileyo ibe ngamava athambileyo nacamngca.
Nika ingqalelo kwimigangatho yakho
Ufuna ukwenza umphezulu woyilo, okhululekileyo ukuhamba kuwo, kwaye oqaqambisa ezinye izinto zoyilo kwindawo yakho yangasese.
• Ithayile yendabuko yodongwe ihlala ilungile ekukhetheni igumbi lokuhlambela njengoko kungenzakaliswa lula ngamanzi. Kodwa imveli ayidingi ukuba ikruqule okanye ivelise. Ithayile iza ngemibala eyahlukeneyo kunye nobukhulu obudlalayo ujikeleze kwaye wenze umgangatho owahlukileyo ohambelana nobuntu bakho.
• Ithayile ebunjiweyo eyenziwe ngesileyiti okanye ilitye lendalo likhangeleka linomtsalane kwaye likwanceda ukwenza umgangatho omanzi ungatyibiliki.
Isiko lesikhumbuzo seminyaka emi-5
Imiphezulu yeetafile entle kwaye esebenzayo
Imiphezulu yeetafile efanelekileyo yokuhlambela ayithathi ndawo, yenza indawo. Izinto eziyilo lokuhlambela zibonelela ngendawo entle apho unokukhululeka khona ukuba ulungele usuku lwakho.
• Igranite ebengezelisiweyo okanye imiphezulu yeetafile zemarble kukuchukumisa okunethezeka okubonelela ngendawo eyomeleleyo kunye nenqabileyo.
• Sebenzisa iithayile ukwenza indawo yokubala enemibala eyahlukileyo neyodlalayo.
• Ukubandakanya ikhabhinethi yeplanga kwisiseko se-countertop yakho kwaye kunceda ukuseka umoya wegumbi. Ukukhanya komthi kunye nomphezulu omhlophe ujongeka uqaqambile kwaye ucocekile kwaye wenza indawo izive ikhudlwana. Bona Okuninzi zoyilo ezimhlophe Apha. Umthi omnyama wongeza umoya wobuhle kunye nothando.
Beka ingcinga kulungelelwaniso lwakho
Ngamanye amaxesha ziinkcukacha ezincinci ezinokunceda ukuzisa igumbi kunye. Qiniseka ukuba ukhetha indawo yokuhlambela ehambelana nesitayile sakho sokuhlambela.
• Kwimvakalelo yesiNtu, khetha izinto ezingaphelelwa lixesha kunye nezithambileyo zoyilo ezinjengee-porcelain okanye amaqhina eglasi kunye notsalo.
• Ukuba ufuna imvakalelo yangoku okanye yeli xesha langoku, sebenzisa izinto ezimbalwa zemveli kwizinto zakho ezifana ne-chrome, intsimbi etshisiweyo, okanye iglasi enekhephu.
I-Travertine yindlela yelitye lekalika esetyenziselwa uyilo lokuhlambela ukwenza ukubukeka okuhle kunye nokufunwa kakhulu. I-Travertine tile ifumaneka kwiindidi ezahlukileyo zombala kunye nezitayile kuxhomekeke kukhetho lwakho. Kuba yenziwe ngezinto zendalo inobuhlobo ngakumbi kwi-Eco kunethayile ye-porcelain. Ukongeza i-travertine tile ine-veining yendalo ebaleka kuyo yonke enika enye yohlobo lwepatheni yokubonakala okhethekileyo.
Eli gumbi lokuhlambela elinobunewunewu ligubungela imeko yalo efudumeleyo kunye nombala. Iindonga kunye nemigangatho zisebenzisa iithayile zelitye leTravertine yendalo, kunye nebhanti egxininisayo yeethayile zamatye ezinqamlezileyo. Izinto zokubala ezisetyenzisiweyo zizinzileyo-ezimhlophe ezimhlophe, ngelixa iingcango zeshawari zisebenzisa iglasi ecacileyo. Ngaphezulu kwako konke, akukho zininzi zagqityiweyo zisetyenzisiweyo, kodwa ikuvumela ukuba ubuxabise ubuhle kunye nomgangatho wezinto zamatye zendalo.
Uyilo lokuhlambela luyinto ephilayo kwaye yahlukile kwifom kunye nolwakhiwo. Imigangatho isebenzisa iithayile zelitye zendalo ezinqamle iimilo ezingoonxantathu, zenza ipateni yomgangatho onomdla ongaphazamisi amehlo kakhulu njengoko isebenzisa uhlobo olunye kuphela lwezinto. Imiphezulu yeetafile, ibhafu kunye nendawo yokuhlambela igqunywe ngamatye egranite akhazimlisiweyo awaziwa ngenkangeleko yawo entle kunye nokuhlala kwayo ixesha elide. Zonke ezinye iindonga zambethe iithayile zekriam zekrimu kwindawo yendalo.
Le ndlu yangasese igqityiwe kodwa igqityiwe kakuhle. Ngelixa uninzi lweendonga zipeyintwe kwi-beige elula, imigangatho kunye nendawo yeshawa igqityiwe ngeethayile zamatye endalo ngombala okhanyayo we-beige. Umphezulu wendawo yokuhlambela kunye ne-splashboard yayo ibambethe imabhile emhlophe, ngelixa iitafile ezingelutho zisebenzisa iBaltic brown granite.
Le ndlu yokuhlambela ineenkcukacha zokwakha ezinomdla kakhulu kunye nezinto ezintle onokukhetha kuzo. Imigangatho isebenzisa iithayile zetrafti yendalo ngokudibeneyo neethayile zemibala ekhilimu, iithayile ezigxininisa umda kunye neethayile zepateni yendlela yayo yoyilo esembindini. Iindonga ziyagqitywa ngokufanayo ngeethayile zelitye zetyhubhu ngokobungakanani bezitena nobeko. Isiqingatha esingaphezulu seendonga emva kweethayile zomda omthubi zipeyintwe ngombala otyheli wemostade, ngelixa isilingi icace gca. Kwi-countertop, i-colonial cream granite yayisetyenziswa. Enye yezona zinto zibalaseleyo egumbini yindawo entle emhlophe ye-porcelain clawfoot tub eneempompo ezininzi ze-chrome.
I-ceramic tile ihlala iludongwe oluqiniswe ngumlilo kwii-oveni kwaye luqaqanjisiwe ukwenza umphezulu okhangayo nohlala ixesha elide. Ithayile yodongwe kwigumbi lokuhlambela yinto ethandwayo kuba kuba kulula ukuyicoca, ixabiso eliphantsi kunye nolondolozo olusezantsi.
Le ndlu yokuhlambela inkulu isebenzisa iithayile zeceramic beige kwiindawo ezahlukeneyo zemigangatho yayo kunye nendawo yokuhlambela. Uyilo oluphakathi ludiagonal kwaye lunqamlezwe ziithayile ze-beige mosaic, ngelixa umphambili wendawo yebhabha ikwasebenzisa iithayile ezilungelelaniswe kakuhle kodwa kubungakanani obuncinci. Umphezulu wendawo yokuhlambela uyindawo emhlophe eqinileyo emhlophe. Amampunge lawo ngawomthi oqinileyo okomthi obomvu obomvu we-Maple kwaye ikhawuntari yawo yiGranite emnyama.
Le ndlu yangasese yangoku idibene ne-aesthetics yanamhlanje kunye nezinto zesintu. Imigangatho yayo ilula iithayile ze-ceramic ze-beige ezinobumba obunomdaka we-mosaic tile. Iindawo zokukhaba zisebenzisa iithayile zekheram ezimnyama ezimnyama, ngelixa imiphezulu yeetafile kunye nendawo yokuhlambela zigutyungelwe ngamabhastile emvelo e-beige. Iindonga zendawo yokuhlamba ziye zafakwa iithayile zelitye lendalo, ngelixa imigangatho isebenzisa iithayile zeceramic kwipateni yebhodi yokujonga. Kwikhabhinethi, i-Oak laminates kwi-plywood yolwandle yayisetyenziswa.
Uyilo lwegumbi lokuhlambela lwala maxesha olujolise ekulula kunye neefom ezicocekileyo kunye nemigca. Imigangatho isebenzisa iithayile ezinkulu ze-60 × 60 zeceramic ezingwevu, ngelixa iindonga zeshawari zisebenzisa iithayile zeceramic ezingama-60 × 60 kumbala omnyama ongwevu. Ukucoca iglasi enomsindo kwasetyenziselwa ukwahlula indawo yangasese kunye neshawa, ngelixa ezinye iindonga kunye nesilingi zipeyintwe ngombala omhlophe. Intloko yeshawa inezinto ezikhanyise ukukhanya kwe-neon ukubonelela ngombono kwisithuba.
Umahluko phakathi kokuzibandakanya nendandatho yomtshato
Izinto zangaphakathi eziphefumlelweyo ezikhuthazwa yimizi mveliso ziye zafumana ukuthandwa njengangoku, kwaye nakwizinto zokuyila zokuhlambela ezinje ngale kubonakala ngathi ziyalandela. Ukufezekisa inkangeleko engagqitywanga yangaphakathi kwezemizi-mveliso, iithayile zekherale zentsimbi ezinombala wentsimbi zazisetyenziselwa imigangatho kunye neendonga ezininzi. Udonga olusisigxina lwalupeyintiwe ngombala omnyama, kwaye oku kudityanisiwe kunye neengcango zeglasi ezingenabushushu bungaphantsi, i-chrome yokugqiba iintsimbi kunye nokulungiswa, kunye neethayile ezimhlophe ezimhlophe zeshawari zokutsala amehlo ethu embindini.
Olu lwakhiwo lwangoku lokuhlambela lusebenzisa ukwahluka kwezinto ezifanayo. Imigangatho kunye neendonga zisebenzisa indibaniselwano yeetayile zodongwe ezikumgangatho ophezulu kukhilimu okhanyayo kunye nomdaka. I-browns isetyenziswa njenge-accents kunye nemida, ngelixa i-tile yokhilimu ngowona mbala usetyenziswayo eludongeni nasemigangatho. Iikhabhathi kunye neeshelufu ziinkuni eziqinileyo ezigqityiweyo zewalnut, kwaye isilingi yagcinwa kumbala omhlophe ocacileyo. Isinki epholileyo ejongayo edadayo ngombala wobhedu ogqityiweyo uhleli phezu kwento endala enefestile eneengcango zeglasi.
Olu luyilo lokuhlambela alukubhombisi ngezixhobo ezahlukeneyo, kodwa endaweni yoko kugxila kubulula kunye nobuhle. Isebenzisa ngokufanayo i-30 × 30 yemarble yokugqiba iithayile zodongwe kumgangatho wayo kunye neendonga zommandla weshawari. Indawo evaliweyo yeshawari isebenzisa iglasi enefreyimu engacacanga ecacileyo, kwaye zonke izinto zekhawuntara ziyi-quartz emhlophe emhlophe. Uyilo oluqhelekileyo lwento engento kunye nendawo yokuhlambela ipeyintwe ngepeyinti ekhanyayo ekhanyayo, kwaye iindonga zipeyintwe kuBenjamin beige.
Le ndawo inkulu yokuhlambela emhlophe isebenzisa imibala ekhanyayo nehlaziyayo kwaye igqibile. Iithayile ezimhlophe zeceramic ezinedayimani emhlophe engwevu zilula kakhulu emehlweni, kwaye iindonga zipeyintwe kwihobe eliluhlaza ngombala nelimhlophe elichaza i-cornice kunye neethayile ezimhlophe kwisiqingatha esisezantsi seendonga. Zonke iikhabhathi zikwingwevu engwevu enemicu emhlophe ecacisa, ngelixa i-countertop ye-vanity ikwi-granite yekrimu entle.
Uyilo lwala maxesha lokuhlambela ludibaniso olunomdla ngokwenene kunye nokukhethwa kokugqitywa. Ngelixa igcina iphalethi yombala elula equlathe imibala emhlophe kunye nemibala emdaka, ukhetho lweetayile luyabonakala. Imigangatho yindibaniselwano yeethayile zecaramic ezimhlophe namdaka ezimdaka, kodwa iindonga zisebenzisa iithayile zekheram zekristale ezimhlophe ezimnyama namdaka. Ibhafu kunye nekhawuntari ye-cantilever inxibe iithayile ze-porcelain ezenziwe ngomthi. Usihlalo wesikhumba omdaka embindini wegumbi lokuhlambela nawo wongeza kwiindidi zezinto ezenziwe kwigumbi lokuhlambela.
Ngelixa eli gumbi lokuhlambela libanzi linikezela ngombono omangalisayo, lisebenzisa izinto ezilungele uhlahlo-lwabiwo mali, ezisebenza njengokugqibezela okubiza kakhulu. Imigangatho ziithayile zeceramic ezilula ekugqityweni kwelitye lendalo, kunye nemida egxekayo yeethayile zemibala. Iindonga zeshawari zisebenzisa izinto ezifanayo kodwa kubungakanani obuncinci. Zonke iindonga zipeyintwe kwi-mocha, wile iziqwenga zefanitshala ezenziwe ngomthi zikumthi we-teak kunye nezinto zokubala ze-cream granite.
Uyilo lwale mihla lokuhlambela alunaluhombiso oluninzi, kodwa endaweni yoko likuvumela ukuba ugxile kuludonga lwayo olwahluke ngokukodwa olufunyenwe ngasemva kwebhafu yokuhlamba. Imangalela iiphaneli zeglasi yegrafiki yegreyidi yoyilo / iipateni. Iindonga kunye nemigangatho yayo yonke indawo yokuhlambela zisebenzisa iithayile ezikhanyayo zekheram, ngelixa iikhabhathi zilungiswe nge-laminates, zine-mocha eqinileyo yokujonga umphezulu.
Itafile yeBaltic brown granite esetyenziswe kule ndawo yokuhlambela ilize izalisekisa kakhulu iikhabhathi zomthi weMaple. Kuba isithuba sinqongophele, bekusetyenziswa isipili esikhulu esingenasakhelo endaweni yezipili ezifreyimweyo, kwaye ukusuka apho uya kuyibona indawo yeshawari esebenzisa iithayile zemibala yeglasi kukhilimu okhanyayo weendonga zayo. Indawo yokuhlambela isebenzisa iithayile zekheramu esetyenziselwa umgangatho ophantsi wegumbi lokuhlambela, kwaye iindonga eziphezulu zikwi-paint-light gloss paint.
Eli gumbi lokuhlambela lisebenzisa iithayile zekheram exubeneyo yomgangatho ophantsi, kunye neetayitile zamatye asikiweyo endalo. I-countertop kunye ne-splashboard isebenzisa i-Colonial cream granite enekhabhathi emhlophe, ngelixa iindonga nophahla zipeyintwe nge-cream faux marble finish with Trompe l Iikholamu zeoyile kunye nesibhakabhaka sokukhanya kwesibhakabhaka.
Le ndlu yokuhlambela inkulu isebenzisa iithayile zendalo zelitye zeceramic uninzi lwemigangatho yayo eneempawu zeethayile zamatye ezimnyama ngombala. Iikhabhathi zelilize ziseMahogany emnyama egqitywe ngetafile yeGranite, ngelixa iindonga zipeyintwe emthunzini ofana ne-Sherwin Williams Crushed Ice, kunye nokubumba okupeyintiweyo eSherwin Williams Skipping Stone (okanye efanayo).
Ngokubanzi iinkuni zendalo azisetyenziswanga kwigumbi lokuhlambela ngenxa yemfuno yolondolozo oluqhubekayo kwimeko enjalo yokufuma. Endaweni yokuba i-porcelain tile yenziwe ukuba ilinganise ukubonakala kweenkuni zokwenyani ukwenza indawo enomtsalane ngaphandle kokuqhekeka. Iithayile zomthi weporcelain zihle, kulula ukuzicoca kunye nolondolozo olusezantsi ezibenza babe lukhetho olukhulu kwigumbi lokuhlambela.
Le ndlu yokuhlambela inkulu isebenzisa indibaniselwano yendalo kunye nezinto ezenziwe ngabantu ukwenza umxube onomdla wemibala kunye nezinto ezenziwayo. Okokuqala, izinto ezisemgangathweni ezisemgangathweni ezisetyenzisiweyo ziyi-wengue emnyama yokugqiba iithayile zeceramic. Ukulinganisa ifuthe lamatye kumatye ekhonkrithi, ishawa isetyenzisile iithayile zeceramic zodaka kwimigangatho yayo, idityaniswe nemayile enemibala emininzi yegreyiti yodonga lweshawari kunye nokubekwa kwezitena kwiithayile ze-ceramic zodonga kwezinye iindonga zeshawari. Elinye igumbi lokuhlambela lipeyintiwe kumthunzi ofanayo we-beige, ngelixa ilize lilaminishwe ngombala wengue ofana nomgangatho.
Indawo yokuhlambela yanamhlanje enomdla kakhulu e-Asiya, ngokuqinisekileyo ezi ndawo ngumthendeleko wamehlo. Imigangatho isebenzisa ukuphathwa kwemozulu eqinileyo Mahogany ngomthi phezu kweethayile zeceramic. Ukugqibezela ukujongwa kweenkuni kwigumbi lokuhlambela, indawo engelutho, ukwahlula kunye nomva kwegunjana lamanzi kunye ne-bidet zafakwa nge-laminates engenawo manzi ekugqityweni kweenkuni ezibomvu ze-mahogany, ngelixa ezinye iindonga zinezinto ezigqityiweyo zekhonkrithi zokulinganisa iinkuni iithowuni kwigumbi lokuhlambela lonke.
Uyilo lokuhlambela oluncinci oludibanisa kakuhle ukugqibezela okungagungqiyo. Imigangatho isebenzisa i-cherry egqityiweyo eyenziwe ngamaplanga, ngelixa iikhawuntari ziyindibaniselwano yomphezulu omnyama nomhlophe oqinileyo. Icandelo eliphezulu lommandla olilize yiplywood kunye nekhonkrithi erhabaxa egqityiweyo epeyintiweyo ngombala omnyama kwaye yenziwe ngentsimbi engenasici ukuyibamba kunye.
I-Porcelain tile luhlobo lwethayile ye-ceramic eqinile kwaye inokumelana nokusetyenziswa okuninzi kunye nokuxhatshazwa okwenza ukuba ibe lukhetho oludumileyo lokusetyenziswa kwemizi-mveliso. Ukufakwa kunokuba yinto encinci ngakumbi kunethayile ye-ceramic esemgangathweni njengoko kufuneka ibotshelelwe kumgangatho we-substrate ukuseta ngokufanelekileyo.
Ukudityaniswa kobunewunewu bezinto zakudala nezangoku, olu loyilo lwendlu yangasese luveza imvakalelo entle kakhulu. Imigangatho kunye nesiqingatha seendonga zisebenzisa iithayile zemarmore esemgangathweni ophezulu, kunye nomda wokuhombisa umda weethayile kunye neepateni zokuhamba. Isiqingatha seendonga zipeyintwe ngombala ofudumeleyo we-beige ngelixa isilingi kunye nee-cornices zimhlophe. Amampunge avela kwiMahogany eqinileyo enebala elimhlophe lemarble.
Uyilo olunomdla kakhulu lwangoku lokuhlambela, esi sithuba sigutyungelwe ikakhulu ziithayile ezinkulu ezimhlophe ze-porcelain. Ummandla ophakamileyo apho ishawa nebhafu yokulala igcwele iithayile zemibala ngokudityaniswa kweebrown kunye nezimvi. Iindonga zipeyintwe kwi-beige ngelixa indawo yokuhlambela isebenzisa iglasi enombala ocacileyo kumnyango wayo weshawari.
Le ndlu yokuhlambela intle isebenzisa iithayile ze-porcelain ezingatyibilikisiyo kumgangatho wayo nakwezinye iindawo zayo, zidityaniswe nepeyinti ekhanyayo yeendonga kunye nomphambili wecranite onemibala efanayo. Ukuxhasa ukubonakala kweklasikhi kwale ndawo yokuhlambela, izixhobo ezigqityiweyo ze-satin zisetyenzisiwe endaweni ye-chrome, kwaye iikhabhathi zigcina ukugqitywa kwayo kwe-mahogany yendalo.
Ngaphandle kokuba inempahla encinci kwaye ifikelelekile, ukhetho lwempahla yobhedu kunye nokulungiswa kwale ndawo yokuhlambela kunokuba kuhle kwaye kuhle, kodwa akoyisi kwaye kujongeka kunzima kakhulu kwaye kuyinkimbinkimbi. Imigangatho emhlophe emhlophe inceda ukulinganisela. Kwiindonga, isebenzisa iithayile ze-porcelain ezipholileyo kumnquma omhlophe omnyama nomnyama. Isipili esihle esenziwe ngobhedu sihambelana ngokugqibeleleyo negolide enkulu kunye namampunge amhlophe.
Le ndlu yangasese idibanisa ubushushu kunye nemibala. Iindonga ikakhulu zipeyintwe kumthunzi opholileyo ongwevu ngombala omhlophe, ngelixa imigangatho kunye neendonga zeshawari zigqityiwe ngeethayile zegranite ze-porcelain kwimibala yekrimu. Ikhawuntari yamampunge ine-Ivory cream inyengane, ngelixa iikhabhathi zipeyintwe kumthunzi ofanayo wekrimu.
Eli gumbi lokuhlambela lisebenzisa iintlobo ezimbini zeethayile: iithayile ze-porcelain ezimdaka nge-60 × 60 zodonga lwayo kunye nemigangatho kunye neethayile zemibala emdaka ngombala wokuhonjiswa kwebhafu. Isahluli seglasi esingenasiphene kwisiphelo esicacileyo nesineqabile sinika umahluko omnandi wokugqitywa kunye nokuthungwa kwisithuba, kunye nezinto ezigqityiweyo ze-chrome.
Uyilo olucekeceke lokuhlambela olunezinto zoyilo zakudala. Imigangatho esetyenzisiweyo yimayile yemabhile ye-porcelain enesahlulo esiphakathi kwisiqwenga esincinci seethayile zegranite. Iinkuni zimnyama mahogany, kunye netyuwa kunye nepepile yeethayile zegranite zebhafu kunye nekhawuntara. Iindonga zikwapeyintwe ngobuchwephesha ngokugqibezela ngemabhile emthunzini okhanyayo.
Uyilo lokuhlambela luhlala luyinyani kubuhle bayo banamhlanje ngokusebenzisa imibala yezixhobo kunye nezixhobo. Imigangatho isebenzisa iithayile ze-porcelain ezingwevu ezimnyama, kwaye iindonga zipeyintwe ngombala omhlophe. Ikhabhathi yodonga lwasekhohlo isebenzisa iimodyuli ezinobungakanani obufanayo neethayile ezisetyenziswe phantsi nasezindongeni, kwaye ngokugqitywa kwayo okuphezulu, kuyenza ibonakale njengeethayile. Ibhafu yokujikeleza embindini wegumbi iyavuya ngeethayile zendalo zamatye ukunika ukutshintsha kobume.
Le ndlu yokuhlambela inkulu isebenzisa iithayile ze-porcelain ezinombala okhanyayo. Indawo yokuhlambela kunye ne-backsplash yayo isebenzisa umbandela ofanayo nemigangatho, kwaye indawo yeziko lokuhlambela inomda we-porcelain tile kunye ne-mosaic tile yoyilo lwayo oluphakathi. Itafile yendawo engento / yedesika isebenzisa isilayidi sendalo ngombala omnandi wepesika, kwaye konke ukubumba, iingcango kunye nekhabhathi zimhlophe.
Imigangatho yale ndawo yokuhlambela ikakhulu i-mocha brown porcelain tile kunye ne-cream accents, ngelixa indawo yayo yeshawari isebenzisa iithayile zendalo ngamatye aneempawu zendalo ezichasayo. Amasango nokubumba kumhlophe, ngelixa iindonga zawo zipeyintwe kumthunzi okhanyayo otyheli. Isilingi isebenzisa ipeyinti ekhanyayo engwevu epholileyo endaweni yesiqhelo emhlophe, kwaye izixhobo ezisetyenzisiweyo zikwisiphelo se-chrome.
Le ndlu yangasese isebenzisa iithayile ze-porcelain ezingama-30 × ezingama-30 ezigqityiweyo kwilitye lendalo. Oku kufikelela kwiindonga zeshawa, ngelixa iindonga ezijikeleze ibhafu zipeyintwe ngeMarsala. Isilingi kunye nokubumba konke kumhlophe, ngelixa i-counter top yento engento isebenzisa i-ruby ebomvu lenyengane.
Le ndlu yokuhlambela ineendonga ezishushu ezimdaka kunye nokubumba okudibanisa ne-porcelain tile flooring kunye nezinto ezimhlophe zokubala. Izinto zeenkuni zeli gumbi lokuhlambela zigqityiwe kumabala amnyama e-oki ukuyinika ukubukeka kwe-antique. Ukuxhasa oku, izinto ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo zikwisiphelo sobhedu.
Le ndlu yangasese ibekwe ngobuchule, ngombono ogqwesileyo wangaphandle. Izinto eziphambili ezisetyenzisiweyo kolu luyilo ziithayile ze-porcelain eziphothiweyo kwipeach / cream cream. Kuba isilingi yeli gumbi lokuhlambela liphezulu ngokwenene, iiphaneli zomthi oqinileyo ze-Oak zazikwasetyenziswa kwinxalenye ephezulu yodonga. Ibhafu enkulu ye-jacuzzi ivumela umntu ukuba azonwabise kwaye onwabele indawo engqongileyo.
Kuyilo olukhulu lokuhlambela, lujolise ekusetyenzisweni kwezinto ezilula kodwa ezinobunewunewu. Imigangatho isebenzisa iithayile ezimhlophe ze-porcelain, ezixutywe kunye neethayile zeglasi emdeni weetayile ezilungelelanisiweyo phakathi. Iikhabhathi zomthi eziqinileyo zifakwe imiphezulu yeetafile zeGranite kwaye iinkuni zigcina umbala wazo womthi oki wendalo. Iindonga zipeyintwe ngombala otyheli kunye nesilingi emhlophe kunye nokubumba.
Imabula yokwenyani intle kwaye ifunwa kakhulu kuyilo lokuhlambela lobunewunewu. Nangona kunjalo, icala eliphantsi liyabiza kwaye linokuqhekeka okanye libala. Ukugcina ubuhle beethayile zemabhile kufuneka butywinwe rhoqo ngetywina elikhuselayo.
Igumbi lokuhlambela eliphangaleleyo lisebenzisa iithayile zomgangatho weMarble ezikumgangatho ophezulu ngokudibeneyo nepeyinti ye-beige ecacileyo yeendonga zayo kunye nepeyinti emhlophe yophahla kunye nokubumba. Ikwasebenzisa ilitye lenyengane elimhlophe elikhazimlisiweyo kwi-countertop yayo ngokudibeneyo nekhabhathi entle yomthi weTeak. Uyilo lodidi lwendawo longeza iinkcukacha ezinomdla kwigumbi lokuhlambela elilula.
Ukusetyenziswa kweethayile zemabhile ezinemithambo eveleleyo engwevu yomgangatho kunye nomphezulu wale ndawo yokuhlambela ngokuqinisekileyo yenza indawo ikhumbuze ubugcisa bokwakha baseRoma. Oku kudityaniswe nophahla olumhlophe olumhlophe, iikhabhathi zomthi wom-oki, kunye nezitena ezipeyintwe ngemibala emhlophe. Isilingi isebenzisa ipeyinti ekhanyayo engwevu endaweni yomhlophe, enceda ekwenzeni ukuba iipaneli zodonga ezimhlophe zime ngcono.
Njengoko le ndawo yokuhlambela isebenzisa iithowuni ezimnyama zeMahogany ngamampunge ayo kunye nezinye izinto ezenziwe ngomthi, ezinye izinto ezigqityiweyo kwigumbi lokuhlambela zinemibala ekhanyayo. Iindonga ziyi-beige elula ngombala omhlophe, ngelixa imigangatho imenyezelwe ngemabhile emhlophe ngemithambo ekhanyayo engwevu. Imathiriyeli yetheyiti nayo iyakhanya ngombala, isebenzisa ilitye le-quartz elimhlophe endaweni yezinto ezimnyama zegranite.
I-Granite, i-slate, i-marble, i-onyx kunye ne-quartzite onke ngamatye endalo ahlala esetyenziselwa uyilo lokuhlambela. Ngelixa ilitye linokubiza kakhulu ukuthenga iprojekthi yokulungisa iziphumo iziphumo ziwumgangatho ojongeka kakuhle wendalo abaninikhaya abawuthandayo.
Le ndlu yokuhlambela inendawo ephezulu enomdla kwaye inika indawo eyandisa indawo, iyenza ibonakale ibanzi. Iindonga zipeyintwe ngombala oqaqambileyo otyheli ngombala omhlophe, kwaye iziqwenga zefanitshala zinezinto ezimhlophe zokugqibela. I-countertop yento engento ikwi-granite ebomvu ekhethekileyo, ngelixa imigangatho kunye neendonga zigutyungelwe ngeethayile zamatye zendalo.
Le ndlu yangasese idibanisa ukukhanya kweendonga zeetan kunye neetayile zendalo kumthunzi ofanayo. Iithayile zikaMoses zisetyenziswa njengemida kunye ne-accents kumgangatho, indawo yokuhlambela kunye nokutshintsha iithayile zodonga zibe ziindonga ezingenanto. Kwindawo engento yanto, iikhabhathi zipeyintwe kwi-Tan, umnyama mnyama kuneendonga, ngelixa i-countertop isebenzisa i-granite.
Igumbi lokuhlambela elibanzi elinokwahluka okuhle kwemibala emnyama kunye nokukhanya. Iindonga zokukhanya kokhrim kunye nophahla lwezincedisi ekugcineni umgangatho ubanzi kwaye ubanzi wendawo, ngelixa iithayile zelitye lentlabathi elikhazimlisiweyo ezinemigca yethayile kaMoses zifudumeza ubume bendawo yonke. Amampunge asebenzisa imiphezulu yeetafile zekranmir zeKashmir, kunye nommandla ophakamileyo webhafu. Iindonga ezijikeleze ibhafu zihonjiswe ngeethayile zemibala, kunye neebhodi zokubala zeekhawuntari. Iikhabhathi kunye needrowa zinomphetho omnyama we-mahogany enika umahluko omnyama kwisithuba.
Nangona incinci, le ndawo yokuhlambela yenzelwe kakuhle kwaye inyangwa ngezinto ezigqwesileyo. Eyona nto ibalulekileyo ludonga lwendalo olugudisiweyo olukhazimlisiweyo kufutshane namampunge. Imigangatho ikwasebenzisa igranite ebunjiweyo yoyilo / ipateni eyahlukileyo kwitafile engento. Udonga olusemva kwebhafu lusebenzisa ukugqiba kweethayile zeceramic ngombala ongwevu, kwaye ezinye iindonga zisebenzisa igranite epholileyo.
Iithayile zamatye endalo zisetyenziswa kwigumbi lokuhlambela kunye noyilo lweetayile olusebenzisa into efanayo. Iithayile ezisetyenzisiweyo azipheliswanga / zigqityiwe zendalo, ngelixa iindonga zigcinwa zilula, zipeyintwe kumthunzi omhlophe. Iikhabhathi zelilize zisekugqityweni kwe-mahogany kunye nekhawuntara ye-granite emdaka ehambelana nayo.
Kule ndawo yokuhlambela eyi-master, indibaniselwano yamatye endalo e-ceramic asetyenziselwa umgangatho kunye neendonga. Inxalenye ephezulu yeendonga zikwipeyinti ekhanyayo yesilumko kunye nesiphumo sokugqiba esibi esikhumbuza iindonga zekhonkrithi eluhlaza. I-splashboard kunye neethayile zomda ezisetyenzisiweyo ziiglasi ezinemibala emininzi kunye neetayile zeCapiz mosaic, ngelixa izinto ezinqabileyo zetheyibhile zizimvi eziqinileyo ezingwevu zidityaniswe ne-teak entle yamampunge.
Igumbi lokuhlambela elinobunewunewu obuphezulu obupholisiweyo iithayile zamatye endalo, zidityaniswe nepeyinti entle efudumeleyo ye-beige yeendonga, ukubumba okune-cream kunye nophahla olupeyintiweyo omhlophe Izinto zelitye ezisetyenziselwa ibhafu kunye nebhentshi leshawa yiGranite emdaka, ngelixa ikhawuntari ivula ukusebenzisa ilitye lemabhile emhlophe kumphezulu wayo.
Uyilo olulula lokuhlambela olusebenzisa uhlobo olunye kuphela lwethayile kuloo ndawo iphela. Isebenzisa iithayile zendalo zamatye e-ceramic kwiithoni ze-beige, zidityaniswe neendonga ezipeyintwe ngombala ofana noSherwin Williams Cargo Pants 40162. Kwinto engento, isebenzisa itafile yequartz emnyama engwevu eneekhabhathi zomthi ezingagqitywanga.
Le ndlu yokuhlambela ibanzi isebenzisa iithayile zelitye lekalika kwimigangatho yayo, ngelixa igcina iindonga zayo zicocekile ngepeyinti emhlophe kwisiphelo se-gloss. Udonga olungemva kwendawo engento lugqityiwe ngetyuwa kunye nepepile yomeleleyo, ekwasetyenziselwa imiphezulu yeetafile kunye ne-fascia. Kwezinye iindonga, izibuko ezingenasiphelo ezigcweleyo nazo zibekwa ukunika ingcamango yendawo enkulu ngakumbi.
Isilayidi lilitye lendalo kunye neenkozo ezintle eziza ngemibala eyahlukeneyo ukusuka kubomvu, zingwevu, nobhedu, nomkhosi waselwandle ukuya kumnyama. Akukho ukufana okuninzi phakathi kwesiqwenga ngasinye sesilayidi esinokukunika iipateni zombala ezinomdla kunye neenkcukacha ezininzi.
Uyilo olulula kakhulu lokuhlambela olusebenzisa iithayile zesilayidi ezingama-30 × 60 kwimigangatho yaso, ngokudibeneyo neetayile zesileyiti ezilingana nezitena ukufaka indawo engqonge ibhafu. Endaweni yepeyinti emhlophe emhlophe, le ndawo yokuhlambela isebenzisa iithayile zeceramic zetena ezimhlophe ezindongeni zayo kwaye ziyayidibanisa neendonga ezingwevu ezikhanyayo kwezinye iindawo zangasese.
Le ndawo yokuhlambela yendalo idibanisa i-slate yendalo phantsi kwi-khrimu kwimigangatho yayo kunye neethayile zekheram efudumeleyo egudileyo kunye nendawo yokuhlambela. Iindonga kunye nophahla lupeyintwe kwiTan ekhanyayo ukunika imfudumalo kwigumbi lokuhlambela. Kwiikhabhathi, zigqityiwe ngomthi omhlophe wokugqiba ii-laminates kwaye zine-countertop entle ebomvu ebomvu.
Kule mihla igumbi lokuhlambela elimnyama nelomhlophe , umgangatho ophambili ugqityiwe ngekhonkrithi ekhazimlisiweyo eneendonga ezipeyintiweyo ezimnyama. Iidrowa zamampunge zigqityiwe ngepeyinti egqityiweyo ngepeyinti emhlophe, ngombala omnyama oqinileyo ocacileyo ophezu komhlaba. Isibuko esidadayo senziwe ngeebrakethi zensimbi ezingenasici, kwaye ukutyibilika kwelinye icala kwigumbi lokuhlambela kusetyenziswa ukubekwa kweenkuni ngobungqina bemozulu.
Uyilo lwangoku lokuhlambela lusebenzisa indibaniselwano yala maxesha, ubume kunye nezinto zokwakha. Ukuqala, imigangatho isebenzisa iithayile ze-porcelain ezigqityiweyo kwisiphatho sekhonkrithi esingwevu, esidityaniswe necandelo elisebenzisa iithayile ezimhlophe ezimhlophe ezinemigca ethe tyaba ukuthintela ukutyibilika. Endaweni yebhodi yebhodi yebhodi yesiqhelo, kwasetyenziswa intsimbi engenasici endaweni yayo njengoko ikwanyamezela ngakumbi ukufuma nokunxiba. Iindonga zidibanisa umbala oshushu we-mocha kunye nesimbo sokubomvu. Kwiindawo ezichaphazelwe ukufuma, iileyili ezingwevu ezingwevu kunye neethayile ze-porcelain ezimhlophe ezimhlophe zisetyenzisiwe.
Amagumbi okuhlambela amhlophe eTile
Eli gumbi lokuhlambela ligcina lilula ngokusebenzisa iithayile zeceramic ezinobungakanani obuncinci obunemibala eluhlaza okwesibhakabhaka kumgangatho wayo kunye neendonga ezivezwe kukufuma. Iindonga zipeyintwe ngetoni emhlophe kwaye isilingi ngumbala oqhelekileyo wepeyinti emhlophe. Ikhawuntari yokuthengisa ilize isebenzisa imiphezulu yeetafile zemabhile emhlophe, kwaye zonke izinto zomthi zikumthi weTeak wendalo. Ishawa enkulu inephaneli yeglasi ebanzi kunye nokugqitywa kwe-chrome.
Iithayile ze-ceramic ezimhlophe zilayini yomgangatho ongaphantsi wale ndawo yokuhlambela ngeethayile ezimnyama ezingwevu njenge-accent. Indawo yeshawari isebenzisa iithayile ezifanayo zemosaic kumgangatho wayo ophambili, kodwa isebenzisa iithayile zendalo zelitye lodongwe kwiindonga zayo ngombala wekrimu. Iikhabhathi nazo zonke ezinye izinto zomthi zigqityiwe ngombala omhlophe, imiphezulu yeetafile kukho umbala omdaka ngebala weGranite kwaye iindonga zipeyintwe emthunzini ofana noSherwin Williams Torchlight SW6374. I-chandelier yekristale ebabazekayo inika indawo entle yokuntywila kwabo bafaka ibhafu enkulu.
Uyilo lwala maxesha lokuhlambela lubonisa indawo enkulu kunye nesilingi ephezulu enesibhakabhaka. Kumgangatho kunye nodonga lwendawo yokuhlamba, isebenzisa i-30 × 30 yemarble yokugqiba iithayile ze-porcelain. Iikhabhathi zisekugqityweni kweenkuni ze-Oak zegolide ngeebala zokubala ezimhlophe eziqinileyo. Iindonga ezijikeleze indawo yokuhlambela ephezulu inezibuko ezigcweleyo ezide ziye kufikelela esilingini, zandisa ukubonakala kwendawo, ngelixa ezinye iindonga zipeyintwe ngombala omnyama.
Kwimigangatho nakwisiqingatha esisezantsi seendonga, le ndawo yokuhlambela isebenzisa iithayile zekrimu ezinemibala enemibala yeethayile zekherale kwiipateni zamaza. Izinto ezenziwe ngomthi kwindawo yokuhlambela zipeyintwe ezimhlophe, kunye neetafile ezimhlophe ezihambelana nazo kunye nokubumba, ngelixa icala elingaphezulu leendonga zipeyintwe eSherwin Williams Butternut SW6389. Isilingi sipeyintwe kumthunzi ofanayo neendonga, kodwa kuyilo olunomdla lokuchuma.
Imigangatho yale ndawo yokuhlambela isebenzisa iithayile zekhwalithi emhlophe emhlophe egqityiweyo iithayile zeceramic kunye neempawu zetayile ezimnyama ezimnyama. Imiphezulu ye-Countertop isebenzisa imarble emhlophe kwaye iikhabhathi zikumthunzi omhle we-wengue. I-cornice isebenzisa umbala ofanayo we-wengue njengekhabhathi, kodwa ibhodi esezantsi ipeyintwe emhlophe, ngelixa iindonga zikumthunzi webhiskithi wepeyinti.
Igumbi lokuhlambela elibanzi kakhulu elisebenzisa iithayile zeceramic ezimhlophe ezingama-30 × 30 kulwakhiwo oludibeneyo. Iithayile ezifanayo zisetyenziselwa indawo yokuhlambela ephezulu, ngelixa iindonga zipeyintwe ngefeksi emarble nge-trompe l'oeil eneenkcukacha kwindawo yophahla. Kwibala lokubala elingenamthi weti teak, kusetyenziswa imiphezulu yeetafile zemabhile emhlophe. Ndwendwela igalari yethu izimvo zokubeka imiphezulu yeetafile yoyilo ngakumbi.
indlela yokonga imali kwizimemo zomtshato
sithini isandla esenza umsesane wesithembiso